Tag: fanaterana | Martech Zone
Ny ankamaroan'ny orinasa mandefa mailaka dia tena manamaivana ny fahafahan'ny fitaterana hisy fiantraikany amin'ny fikambanan'izy ireo. Ny mailaka tsara sy voaorina ary mahomby be dia be dia be ao anaty tranokala famaohana olona iray izay nanao famandrihana sy maniry hiova fo amin'ny orinasanao. Tena toe-javatra mampidi-doza izany. Mbola ratsy kokoa aza, mety tsy ho tsapanao akory fa alefa any amin'ny fako ny mailakao raha tsy mampiasa fitaovana fanaraha-maso boaty. Ny tolo-kevitro momba izany dia ireo mpiara-miasa aminay